June 18, 2020 - Khitalin Media
ကြှနျတျောဖတျမိတဲ့ မိနျးမမွတျ တို့အကွောငျး
June 18, 2020 Khitalin Media 0
ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့ မိန်းမမြတ် တက်တူးထိုးတိုင်းမိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဂုဏ်သရေရှိမိန်းမပျိုတိုင်းတက်တူး မထိုးကြဘူး…. ဆံပင် ဆေးရောင်စုံဆိုးတိုင်းမိန်းမပျက် မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ မိန်းမပျိုတိုင်းပိတုန်းရောင်ကေသာလေးနဲ့ လှကြတယ်… အတိုအဟိုက်တွေ ဝတ်တိုင်းပေါ့ပျက်ပျက်မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်မိကောင်းဖခင် သားသမီးတိုင်းလျပ်ပေါ်လော်လီ မဝတ်ကြဘူး….. အရက် ဘီယာ သောက်တိုင်းအပေါစား မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် မိန်းမမြတ်မှန်ရင်ကံငါးပါးကို မကျူးလွန်ကြဘူး…. ချစ်သူ […]
အင်းဝတံတားပေါ်က ခုန်ချသွားတဲ့ အမွှာညီအစ်မ နှစ်ဦးထဲကအမကြီးဖြစ်သူကို ယနေ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ (ရုပ်သံ)
ယခု သတင်းကို ( အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် အင်းဝတံတားမှ ခုန်ချခဲ့သော အမွှာညီအမနှစ်ဦး အနက် အကြီးမဖြစ်သူအား၂၅ရက်အကြာ ဧရာဝတီမြစ်၊ ပေါက်လှကျွန်းအနီးပြန်လည်တွေ့ရှိ (18.6.2020) (ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတင်ပေးထားပါတယ်) မေ ၂၄ […]
”သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း)”
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း မေတ္တာပို့နည်း သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. သံဃံ […]
ကလေးတွေကို တောင်းစားခိုင်း တဲ့ဂိုဏ်း အကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့ပြောပြတဲ့ကောင်လေး…
ကလေးတွေ လိုက် ခိုးပြီး တောင်းစားခိုင်း တဲ့ဂိုဏ်း”အကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့ပြောပြ တဲ့ကောင်လေး မထင်မှတ် ပဲ ၆၂လမ်း စံပြလမ်းဒေါင်းက Co Co မှာရခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါအသစ်။ စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲမှာ နေပူပူမိုးရွာရွာ အကျီ ဘယ်တော့မှ မဝတ်တဲ့ခလေး ညီလေးဘာလို့တောင်းစားနေတာလဲမေးတော့ ထင်မထားတဲ့ဖြေကိုပေးတယ် ကျနော် အဖေမရှိတော့ဘူးတဲ့ အမေကနောက်ယောက်ကျာင်္းယူလိုက်တာတဲ့ […]
အိပ်ရေးပျက်သူ ၊ မူးဝေအလုပ်ပင်ပန်းနေသူများအတွက်
“အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်” အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလိုိ့ ,ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက်ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့- 1/ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး(မည်သည့်ကြက်ဥမဆို) 2/သံ ပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ 3/သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှိံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။။ မှတ်ချက်။ သကြားဖြူနှစ်ဇွန်းထက်လျော့၍မရပါ။သကြားနည်းပါကချွဲပြီးသောက်၍အဆင်မပြေပါ။ဆီချိုရှိသူများဆီးချိုသုံးသကြားကိုသာအစားထိုးအသုံးပြုပါ။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” ခရစ်ဒစ် Unicode “အားအငျကုနျခမျးမောပနျးနှမျးနယျခွငျးနှငျ့ မူးဝခွေငျးကိုသကျသာပြောကျကငျးစသေညျ့ ကွကျဥသံပုရာဆမျးဆေးတဈခှကျ” အလုပျပငျပနျးလို့ဖွဈဖွဈ၊အားအငျကုနျခမျးလို့ ,ဖွဈဖွဈ၊မူးဝနေရေငျပဲဖွဈဖွဈအလှယျတကူ သကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့ဆေးနညျးတဈလကျကိုမြှဝပေေးပါ့မယျ။ […]
သွားကိုက်ပျောက်ဆေးနည်း သွားကိုက်ရောဂါများ မည်သည့်နည်းနဲ့ကိုက်ကိုက် ဘယ်လောက်ပဲကိုက်ကိုက် (၅) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် ဆေးနည်း မည်သည့်နည်းနဲ့ သွားကိုက်ကိုက် အသုံးဝင်ထိရောက်စေသော သွားကိုက်သွားနာ ဆေးနည်းတစ်လက်မှာ (၁) ကပ်စေးနှဲသီးများကို မီးဖြင့်ကျွမ်းအောင်လှော် (၂) အမှုန့်ထောင်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့် (၃) ကိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သွားကို ဆေးမှုန့်သိပ် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၄) […]
မွနျ့မာရိုးရာ အိမျထောငျဖကျ ရှေးနညျး(စ-ဆုံး)
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း(စ-ဆုံး) တွက်နည်း အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။ ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း […]
ခေါင်းအုံး ညစ်ပတ်ခြင်းကြောင့် အသက်ကိုပါ ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူ တစ်ဦးရဲ့အဖြစ်…..
အသက် (36) နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက် မအီမသာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ စီးပွားရေး သမား ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးပန်းတာပဲလို့ ယူစပြီး ပေါ့ပေါ့ ဆဆနေ ခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပတ်ကြာတဲ့ အထိ ဝေဒနာက မသက်သာလို့ သူ့မှာ […]
မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့ အစပျိုးလက္ခဏာရပ်များ
မိန်းကလေးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့အစပျိုးလက္ခဏာများ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက အမျိုးသားတွေနဲ့ လုံးဝကိုခြားနားနေပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာသာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်လများအစပျိုးပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ရောဂါအစပြုနေချိန်မှာ သတိထားမိခဲ့ရင်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ရောဂါအစပျိုးလက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အစားစားချင်စိတ်နည်းလွန်းခြင်း တခါတရံမှာ အစားစားချင်စိတ်ပျောက်နေတာမျိုးကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။ […]
အဆိုတော်ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူနဲ့အိပ်ရာပေါ်မှကိစ္စတွေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ မယ်လိုဒီ
ကျော့ရှင်းသွယ်လှတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မယ်လိုဒီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှာပြီး Single mother အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မယ်လိုဒီရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မယ်လိုဒီဟာ ရေဗက္ကာဝင်းနဲ့ တစ်ချိန်က ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်ဖူးသူနဲ့ နောက်ကွဲမှာဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူနှင့် Valendine Day တစ်နေ့လုံးမှာ အိပ်ရာပေါ်မှာ […]